Uqeqesho lwe-ITIL | I-ITIL Certification | ITIL Course - ITS Tech School
UkuQeqesha amaKlasi okuHlanganisa
I-14000 + Iingcali eziQinisekisiweyo
Isiqinisekiso seSigqeba soMhlabaNesiqinisekiso sokuqinisekisa isiqinisekiso se-100%
Kule marike ephazamisayo, amashishini kufuneka afumane iindlela ezifanelekileyo zokuphathwa kolawulo, ukuze kuqinisekiswe ukuba bahlale phambili kwintcintiswano kwaye bavelise inzuzo. I-Library IT Infrastructure Library (i-ITIL®) iyona miselo ebalulekileyo yeendlela zokuphatha iinkonzo ze-IT ezilungiselela ukulungelelanisa iinkonzo ze-IT kunye neemfuno zezoshishino. IYO ikuzisa ikhosi kwi-ITIL® Foundation ekwazisa izinto eziphambili, iingcamango kunye nesigama esetyenziswa kwi-ITIL® Service Lifecycle. Ngokuzivocavoca ngokubanzi, iimvavanyo ezihlekisayo kunye nekhosi epheleleyo, uya kulungelelanisa ukuzama isatifikethi se-ITIL® Foundation kunye nokuphunyezwa kwemigaqo ukuhlangabezana nemingeni yehlabathi. Qaphela oko IziCwangciso zeNkcazo zeNnovative liQumrhu lokuQeqesha eliVunyelweyo (ATO) le-PEOPLECERT kunye neCreditner Partner of Axelos ye-ITIL® Trainings.
Ekugqibeleni le workshop kunye nokuzama ukuphumelela koviwo, abaviwa baya kuba nekhono kwi:
Qonda ngokupheleleyo iingqiqo, imiqathango kunye nesigama sesigama se-ITIL®
Qonda i-ITIL®iindlela ezifanelekileyo kunye nendlela yokuzifezekisa ngayo ukucwangcisa iinkqubo zokuphucula okuqhubekayo
Ukuqonda izinto ezisisiseko zoLawulo lweNkonzo kunye neMpilo yeeNkonzo ukuphucula izigqibo zezorhwebo nokuphucula ukulindela amakhasimende
Yilungiselele ngokupheleleyo i-ITIL®Isiqinisekiso seSiseko
Uluhlu lwezifundo ze-ITIL
2. I-ITIL phakathi kwe-SS (ISicwangciso seNkonzo)
3. I-SD ephakathi kwe-SD (IiNkonzo zoMsebenzi)
4. I-ITIL ephakathi kwe-ST (iNguqulelo yeNkonzo)
5. I-ITIL esiphakathi SO (IiNkonzo zeNkonzo)
6. I-ITIL ephakathi kwe-CSI (Ukuphuculwa kweeNkonzo eziqhubekayo)
7. ITIL phakathi kwePPO (UkuCwangcisa, ukuKhuselwa nokuSebenza)
8. I-ITIL phakathi kwe-OSA (inkxaso kunye nokuhlaziywa komsebenzi)
9. I-ITIL ephakathi kweRCV (ukukhutshwa, ukuLawula kunye nokuqinisekiswa)
10. I-ITIL ephakathi kwe-SOA (iiNkonzo kunye nezivumelwano)
11. I-ITIL iLawula kwi-Lifecycle
13. I-ITIL yabaSebenzi boLawulo loLawulo (SMP)
Indlela yokufumana isiqinisekiso kwi-ITIL
Injongo yale Isitifiketi seSiseko se-ITIL KuLawulo lweeNkonzo ze-IT kukuqinisekisa ukuba umviwa sele ufumene ulwazi lwegama lesi-ITIL, isakhiwo kunye neengqiqo ezisisiseko kwaye uye waqonda imigaqo-siseko ye-ITIL yokuphathwa kweenkonzo.
The ITIL v3 Isiqinisekiso esiphakathi iyafumaneka kunoma ubani oye wadlulaUvavanyo lwe-ITIL Foundation. Iqukethe isakhiwo esimiselweyo ngeyomodyuli nganye enika ingqwalasela eyahlukileyo kwi-IT Service Service. Unokuthatha njengabantu abambalwa okanye abaninzi abaphakathi.
Abanikezeli abaninzi be-IT ngoku bafumanisa ukuba balawula abasebenzi abangaphezulu kwabasebenzi kunabasebenzi babo. Enyanisweni, kuthethwa ngokunyuka kweendlela zokuhlanganiswa kwenkonzo ukuba uqeqesho lwe-informatics lwexesha elizayo luya kufuneka lube neNzululwazi
UkuLawula Ubungozi Boshishino kwiNkonzo zakho
Nciphisa iNkonzo yokuphazamiseka
Fumana ixabiso lemali kumniki-wesevisi wakho
Qinisekisa ukuba abathengi bakho bangasebenzisa iinkonzo nini kwaye apho kuyimfuneko
Inkxaso yokuThengisa nokuSebenza kweenkonzo zakho
Kwi-1980, iThala leeNkcukacha zeTeknoloji yeeTeknoloji zoLwazi (i-ITIL) ithuthukiswa yiComputer ye-computer kunye ne-Telecommunications Agency (i-CCTA), bekuyixesha apho i-UK ilwa neengxaki kwiSebe le-IT. Kwingqungquthela yokuqala kwakukho iincwadi ezininzi ezithintela iinkqubo ezithile kwi-ITSM.
I-Version ye-ITIL i-1 iya kwii-30-1986 ngaphezu kwe-1996-XNUMX, leyo yilexesha apho le nguqulo isetyenziswe ezininzi iinkampani ze-IT. Ngenxa yobume bezobugcisa, le nguqulo yaphuculwa kwi-version elandelayo okt ITIL I-2 Version, kwi-2001. Le nguqulo ifumaneke ngakumbi kwaye igxile xa kuthelekiswa neyokudlulileyo. Le nguqulo entsha ye-ITIL ngoku idibeneyo yee-9 Management Sets. Kuzo ii-2 Ukuphathwa kweenkonzo Iseshoni zazisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwiCandelo le-IT. I-Version ye-ITIL I-2 Glossary yeza kuthumela umfanekiso kwi-2006.
ICandelo leKomkhulu leKhomishoni yeeKhompyutha kunye neeThungelwano zoThutho lidibaniswe ne-Ofisi yoRhwebo kaRhulumente (OGC) ngaloo nyaka xa i-ITIL Version 2 iqalisiwe. Ku-2007, le ntlangano iqalise inguqulo elandelayo ye-ITIL ebizwa nge-ITIL Version 3 (V3) okanye i-ITIL 2007 Edition okanye iProjekthi ye-ITIL Refresh.
Ngoku i-V3 iyancishiswa ukusuka kwi-9 Volumes kwi-5 Volumes kwaye icacisa umgaqo weNkonzo yokuPhila. Ezi zibizwa ngokuthi: -
Isicwangciso seNkonzo (SS)
Uyilo lweNkonzo (SD)
Utshintsho lweNkonzo (ST)
IiNkonzo zeNkonzo (SO)
Ukuphuculwa kweeNkonzo eziqhubekayo (CSI)
Emva koko kwi-2009, yonke inguqu yangaphambili isuswe emva komyalelo nguRhwebi loRhulumente. Inguqu ephuculweyo ye-2007 Edition yashicilelwe kwi-2011. Le yinguqu yokugqibela ehlaziywe.
Yintoni Umthengi Wentengiso?
Shweta Sharma, Usebenziso lweeNkonzo eziphakathi kwe-ITIL
Tarun, I-ITIL- I-Intermediate Service Design
Iziko layo elikhulu kunye nabasebenzi bekhontrakthi kunye ne-Infra efunekayo. Kucocwe i-ITIL isiseko kwinzame yokuqala kunye namanqaku amahle. Ncoma konke ukuba ujoyine oku kuqinisekiso lwabo.
Ojasv Jain, Usebenziso lweeNkonzo eziphakathi kwe-ITIL
Kamal Kant Sharma, Usebenziso lweeNkonzo eziphakathi kwe-ITIL
Abaxhasayo abasebenzi be-Gr8. Umqeqeshi unamava amnandi kwi-ITSM. Umgangatho wokutya ogqwesileyo. Amava amanqaku amahle kakhulu ngexesha loqeqesho
Rakesh Ass, I-ITIL iLawula kwi-Lifecycle
ezaposwa ngomhla23 Mar 2018
ezaposwa ngomhla04 Jan 2018
ezaposwa ngomhla26 Dec 2017
Indlela i-ITIL yeSatifikethi esiSebenza ngayo
ezaposwa ngomhla04 Dec 2017
ezaposwa ngomhla14 Nov 2017
ezaposwa ngomhla01 Nov 2017
ezaposwa ngomhla11 Oct 2017
ezaposwa ngomhla23 Jun 2017
ezaposwa ngomhla22 Jun 2017
ezaposwa ngomhla07 Jun 2017
Ziziphi iimviwo ze-ITIL® ezinokuthathwa kwaye zeziphi iimfuneko zokungena?
Iskimu soqinisekiso se-ITIL® sinikeza uluhlu lwezatifikethi ezijolise kwimimandla eyahlukeneyo ye-ITIL Framework.
ITIL Foundation - Akukho nto imfuneko njengoko kunjalo kwaye nabani na ofuna ukuqhuba umsebenzi kulo mboni unokuya kwisitifiketi se-link (Foundation). ISIT isitifiketi seSiseko se-certified is certified level in ITIL Uhambo
ITIL phakathi - Ukuze uhambe nayo nayiphi na isitifiketi esiphezulu se-ITIL (i-Lifecycle okanye i-Modable Module) kufuneka ufumane iziqinisekiso zobungqina.
Uchwepheshe we-ITIL Uhambo - Ukuze ube yi-ITIL Expert, kufuneka uhambe kwiimodyuli ze-ITIL zoQeqesho kunye nokucoca ii-Exams ze-Certification nazo, ngokwenza njalo uza kufumana i-Credits ethile. Ukufezekisa i-ITIL yeNgqungquthela yenkcazelo ufuna udonke lwe-23 Credits.
Ziziphi iindlela zokuhanjiswa kwezifundo zoqeqesho ze-ITIL?
Kwi-Innovative Technology Solutions sinikeza uqeqesho lwe-ITIL kwiindlela ze-3 ezahlukeneyo zoqeqesho -
1.Uqeqesho lweKlasi EIndiya (Kubandakanywa - Ukuqeqesha + Indawo yokuhlala + Ukutya + Isikhumulo sezindiza Ukukhupha & Ukuhlahlela + ukuThuthwa kweSuku zonke + nezinye izibonelelo).
2.Umqeqeshi we-Intanethi Uqeqesho onokuyithatha ekuthuthukisweni kweofisi yakho okanye ekhaya.
3.Imodi yoQeqesho lwangaphandle - Xa sithumela umqeqeshi wethu kwindawo yakho ukuhambisa uqeqesho kwisiseko sakho, ukuba unabantu abathathi-nxaxheba abaninzi (ngaphezu kwe-5 pax) yoqeqesho.
Ngubani abaqeqeshi eklasini kunye noqeqesho lwe-intanethi (OILT)?
Innovative Technology Solutions (ITS) yiQumrhu eliQinisekisiweyo loQeqesho lweeNkcazo kwaye libonelela ngokufanelekileyo kwiinkqubo zenkqubo zoqeqesho olusemthethweni zithunyelwa ngabaqeqeshi abanamava kakhulu kwi-IT Training Industry.
Yiyiphi imisebenzi engayifumana emva kokuba ibe yi-ITIL eqinisekisiweyo?
Ukuba ungenqanaba lokungena okanye uneminyaka emibini ye-IT, ungalindela ukuba uqeshwe njengomququzeleli wenkqubo. Umququzeleli wenkqubo uqinisekisa ukuba imisebenzi yolawulo kwinkqubo yenziwa njengenzelwe. Umququzeleli weNkcazo, utshintsho umququzeleli kunye nohlalutyi lwamalungiselelo ngabanye baxanduva lwee-coordinator ezifumaneka kwi-ITIL®-Based IT service management.
Kwinqanaba lokulawula eliphakathi, ubuncinane ubuneminyaka engama-8 ubudala, unokucelwa ukuba ulawulwe iinkqubo ekupheleni. Uya kuba nabaququzeli bokubika kuwe, kwaye uya kuba noxanduva lokuqinisekisa ukuba imisebenzi ekulawulweni kwenkonzo iyahambelana neenkqubo. Umphathi weengxaki, umphathi wokukhulula kunye nomphathi wedesksi wenkonzo yileminye yemisebenzi yolawulo.
Ukuba ufuna ukungena kwi-ITIL® indima yokubonisana, kufuneka udibaniswe ngendlela eyahlukileyo. Umele ube ngumntu oqaphela ngokuzenzekelayo ukungangqinelani kwiinkqubo aze acinge ngokucwangcisa. Makhe sithathe imeko engekho ye-IT umzekelo. Kwivenkile yokutyela, umncedisi uhlala nawe. Umlungiseleli uthatha umyalelo. Umgijimi wokutya uthetha ukutya, kwaye i-busser icoca ityeyibhile. Akukho nanye yale midima inokwenziwa ngaphandle. Xa u tyelela ivenkile, uyayibona le nkqubo? Ngaba ubona utshintsho kwaye ucinga malunga noko kusebenzayo, kuthini na? Ukuba ubona kwaye ucinga ngale ndlela, unokuzigqwesa kakhulu kwinkqubo yomcebisi / inxaxheba yenkqubo yonjiniyela. Inkqubo yabacebisi ngokuqhelekileyo ine-10 iminyaka yamava kunye nokuthanda ukumbamba izandla ngaphakathi kuyo yonke imisebenzi, ngaphakathi kwe-ITIL® naphandle. Umsebenzi ohloniphekileyo kakhulu kumashishini, kodwa kufuneka uthande iinkqubo zokubhala kunye nokudala iitshathi zeempawu.
Ekugqibeleni kodwa kungeyona encinci; unokuba ngumqeqeshi we-ITIL. Nge-ITIL® kwimfuno enkulu ngabaqeshi, abaninzi abafuna umsebenzi bahamba ngendlela ye-ITIL®. Ukuba ufuna ukuba ngumqeqeshi, funda yonke inkqubo ye-ITIL® ngokubanzi. Umqeqeshi we-ITIL® uya kufuneka afake isigqoko sezemfundo ukuze aqeqeshe abafundi kangcono kwi-ITIL®.
Intlawulo yethu yoqeqesho iquka ntoni?
I-Classroom Training Fee ifaka -
• UQeqesho oluQeqeshwe kunye neZiko loQeqesho loQeqesho
• Iimviwo zokuHlola iimviwo
• Indawo yokuhlala nokutya (Kwi-Hotel ye-3 Star)
• ISibonelelo soThutho ngeSuku
• Isevisi ye-Wi-Fi yamahhala kwinqanaba loqeqesho & Ihotele
• I-100% yokuGqithisa iSiqinisekiso
I-Training Training Fee ifaka -
Ndiyifumana njani iincwadi zam?
Kwimali yokuqeqesha yakho ibandakanya umrhumo wokuhlolwa kweemvume, ngoko ke uvavanyo luza kubhalwa ngqo kwi-ITS
Ngaba izatifikethi zam ITIL ziya kuphelelwa yisikhathi?
Izitifiketi ze-ITIL azipheli. Nangona kunjalo, kukho iinguqu ezahlukeneyo ze-ITIL v3 2011 eyona nguqulelo. Emva kokuba uhlaziyo olutsha lwekhosi luqalisiwe, kuya kufuneka uqinisekise kwakhona.
Yiyiphi isitifiketi esiya kufumana emva kokugqiba uqeqesho?
Emva kokugqitywa ngokuphumeleleyo koqeqesho kunye nokucima uviwo, uya kunikelwa iSatifikethi seMvume esivela kwi-Axelos.
Yintoni eyenzekayo xa ndingaphumeleli uvavanyo?
Kwi-Innovative Technology Solutions, Sinika i-100% yokuqinisekisa ukugqithisa ukwenzela ukuba i-1 ihluleka ukuvavanya okanye ihluleka ukuhlolwa kwe-2, sinika i-2nd shot (i-Reattempt) ngaphandle kweendleko.
B-100A, iSixeko saseMzantsi-1,
Kufuphi neTyikityo yoNyaka
Umgangatho wokuqala, i-H-159,
Vimba H, Icandelo 63,
I-207, i-2nd Floor, i-Lok Centre, iMarol Maroshi Road, kunye ne-Andheri East, iGamdevi Mumbai-400059, Maharashtra
I-5th Floor, Icandelo -V,
Idolophu yaseSalt Lake
Umyalezo wakho *